El Salvador Archives-Funda ukurhweba
I-Bitcoin Ibandezeleka Ukuphahlazeka ngaphantsi kwe-$ 60K njengoNayib Bukele "Uthenga iDip," Kwakhona
Umongameli wase-El Salvador uNayib Bukele uthathe ithuba lamva nje Bitcoin (BTC) dip kwakhona, njengoko ethenga iingqekembe ezingakumbi phakathi kwe-selloff eqatha.
UMongameli Bukele ubhengeze nge-Twitter ukuba uthenge i-420 ngaphezulu kwe-BTC, inombolo ye-meme ehambelana noluntu lwentsangu, esinye isenzo esihlekisayo. Ngelixa uBukele engazange apapashe i-TXID, uMongameli ubanga ukuba ukuthenga kwakhe kwakusele kunenzuzo.
Ngaphandle kweqhinga lakhe lobunkokeli obunegunya, uNayib Bukele ufumene inkoliseko emehlweni oluntu lweBitcoin kwaye mhlawumbi ngoyena Mongameli uthandwayo leli qela. Amalungu oluntu ahloniphekileyo, njengo-Anthony Pompliano okanye uMichael Saylor, bahlala bebhekisela kuMongameli waseSalvador kunye neevoti zimnika i-80% yokuvunywa kwe-XNUMX% ngokwedatha evela kuphando oluninzi ngamaziko ahloniphekileyo, kuquka i-CID Gallup, iYunivesithi yaseFrancisco Gavidia, iMitofsky, kunye neLa Prensa Grafica. .
Nangona kunjalo, abantu abaninzi baseSalvador abanelisekanga yimizamo kaMongameli yeBTC kwaye bayamkela njengethenda esemthethweni, echaza uMthetho weBitcoin njengo. “hayi ubulumko.” Ukuphunyezwa ngokukhawuleza komthetho kwaphembelela uqhanqalazo oluqatha oluchasene ne-BTC kwilizwe lonke, kwaye i-BTC yehla ngaphezulu kwe-10% ngosuku urhulumente abhengeze ngalo ngokusemthethweni ukuthengwa kwayo kuphela imicimbi yaba mandundu.
Nangona kunjalo, ukubamba kwelizwe ngoku kubaluleke kakhulu "luhlaza" ngokuqwalasela ixabiso langoku. Ngokuthengwa kwakutshanje, i-El Salvador ibambe i-1,120 BTC.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukelwayo-Okthobha 28
Ukulandela ukugatywa okubukhali malunga nommandla we-63,700 yeedola, i-BTC yafumana ukuhla kwe-parabolic ukuya kwi-58,100 yeedola eziphantsi kwiiyure ezidlulileyo ze-24 nangona iimeko zokurhweba ezilungileyo (zingathathi hlangothi). Inkxaso ye-58,000 yeedola ithintele nakuphi na ukuhla ngakumbi kwaye ibeke i-benchmark cryptocurrency emva kwekhosi ye-60,000 yeedola, njengoko i-BTC ithengisa malunga ne-59,000 yeedola ngale ntsasa.
Ngelixa ndilindele ukubuyiswa okuzinzileyo kwi-61,000 indawo ubuncinane kwiyure kunye neentsuku ezizayo, i-BTC isenokungazikhulula kwiimeko ze-bearish, kwaye ukuhlanganiswa kwe-bearish akuphumanga kumfanekiso osondeleyo.
I-Bitcoin Dominance: 44.9%
I-El Salvador yokubonelela ngokukhululwa kwiRhafu yeBitcoin ukukhuthaza ukuthatha inxaxheba kwamanye amazwe
Ukukhuthaza utyalomali lwangaphandle kwi-cryptocurrency kwilizwe, urhulumente we El Salvado ibhengeze ukuba abatyali mali bamanye amazwe bazakufumana ukungakhuseleki kwirhafu yenzuzo yeBitcoin (BTC). Isibhengezo sivela kumcebisi karhulumente ngoLwesihlanu odlulileyo.
Kudliwanondlebe ne-Agence France-Presse (AFP), umcebisi wezomthetho kuMongameli Nayib Bukele, uJavier Argueta, uqaphele ukuba:
“Ukuba umntu unempahla kwiBitcoin kwaye wenza ingeniso ephezulu, ngekhe kubekhona rhafu. Oku (kwenziwe) ngokucacileyo ukukhuthaza utyalomali lwangaphandle. ”
Umcebisi wezomthetho kamongameli ukwaphawule ukuba urhulumente wayesezingxoxweni nemibutho yamanye amazwe ukuphuhlisa kunye nokufaka izindululo zokuthotyelwa. Amagunya ahlonitshwayo ehlabathi afana neNgxowa-mali yeMali yeHlabathi (i-IMF) akhankanye ukulandelela kunye nokuthintela imisebenzi engekho mthethweni njengezona zinto ziphambili ezijikeleze ukwamkelwa kweBitcoin njengethenda esemthethweni.
Okwangoku, kumanqanaba ayo okuqala, ukuphunyezwa koMthetho weBitcoin e-El Salvador kudale ezinye iingxaki kurhulumente. Ukugxekwa kwentshukumo kuye kwavela macala onke, kubandakanya abemi, amaqela aphikisayo, kunye nabasemagunyeni kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, ulawulo lweBukele luyaqhubeka nokuqhubela phambili lungatyhafiswa kukunganyangeki.
Urhulumente usungule i-Chivo Wallet njenge-walt ye-BTC esemthethweni ngoSeptemba 7 kwaye wanikezela umvuzo we-30 kwi-BTC kubasebenzisi bokuqala. Urhulumente uthenge i-400 BTC ngolindelo lomgaqo-nkqubo kwaye kuthiwa akahambi kakuhle.
Amava e-El Salvador Bitcoin azaliswe nge-Ups kunye ne-Downs
Ngelixa kuhlala kungaziwa ukuba lonke uphuhliso luza kuphuma kanjani kwixesha eliphakathi nelide, abagxeki bacaphule imiba eliqela, kunye nokuguquguquka kokubeka uluhlu lwezinto ezixhalabisayo. Kananjalo, abaphathiswa bangaphakathi kurhulumente balumkisile ukuba iintlawulo zemivuzo kwi-BTC zinokubandezeleka ngenxa yokungazinzi.
Uhambo lwe-El Salvador Bitcoin lunamahla ndinyuka amaninzi, ukukhwela ngokukhawuleza. Ngenxa yokuba eli lilinge lokuqala ngohlobo lwelizwe, i-El Salvador ayinayo nayiphi na incwadi yemigaqo ekufuneka ihambile kwaye kufuneka izibonele ngokwazo.
Oko kwathiwa, amehlo aya kuba kulingo lwe-El Salvador Bitcoin ukubona ukuba iphuma njani kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
tags Bitcoin, Cryptocurrency, El Salvado , iindaba
I-El Salvador ibona uqhanqalazo olunamandla ngokuchasene nokuphunyezwa koMthetho weBitcoin
Abemi base-El Salvador bangena ezitalatweni beqhankqalaza ngolwe-Sihlanu odlulileyo malunga nokwamkelwa ngokusemthethweni kweBitcoin kweli lizwe. Eli nyathelo liza kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokuba i-El Salvador isemthethweni i-Bitcoin Law, eya kuvumela ilizwe ukuba lenze i-BTC imali esemthethweni ngokusemthethweni kunye ne-USD.
Ngelixa uMongameli wase-El Salvador u-Nayib Bukele egcina umbono oqinisekileyo wokuhamba kwe-Bitcoin, kubonakala ngathi uninzi lwabemi alunalo olu luvo. NgoLwesihlanu odlulileyo, amakhulukhulu abaqhankqalazi ahamba kwimizi-dolophu, iSan Salvador, ukuya kunxibelelana neenkxalabo zabo malunga nokusetyenziswa kwe-BTC.
Abasebenzi abaninzi kunye nabadla umhlala-phantsi badlulisa ukungavisisani malunga nesicwangciso sokuhlawula ipenshoni kunye neentlawulo zentlalontle kwiBitcoin. Abaqhankqalazi babephethe iiplacards ezazifundwa “Bukele, asifuni bitcoin” kwaye "Hayi ukonakalisa imali ngokungekho semthethweni." UStanley Quinteros, ilungu leNkundla ePhakamileyo yeNyunyana yabasebenzi, uxelele iReuters ukuba:
Siyazi ukuba le ngqekembe itshintsha-tshintsha kakhulu. Ixabiso layo liyatshintsha ukusuka komnye umzuzwana ukuya komnye, kwaye asizukulawula. ”
Amanye amazwe abeka esweni uPhuhliso lwe-Bitcoin lokwamkelwa komntwana e-El Salvador
Esinye sezizathu ezibalulekileyo zentshukumo yokumisela ngokusemthethweni i-BTC ngurhulumente kukunciphisa iindleko zokungena kwimida yokuwela. Into enomdla kukuba, amanye amazwe akuMbindi Merika anezinjongo ezifanayo kodwa abeka iliso kwinkqubela phambili ye-El Salvador ngaphambi kokuthatha amanyathelo.
Amazwe amaninzi ajonge ngolangazelelo ukubona ukuba ukwenza iBitcoin ithenda esemthethweni kuya kuba nefuthe kwiindleko zokungena kwimida yokuwela. Kudliwanondlebe neReuters, umongameli olawulayo we-Central American Bank for Economic Integration (CABEI) uDante Mossi uqaphele ukuba:
"Wonke umntu ujonge ukuba ingaba ihamba kakuhle na i-El Salvador kwaye, umzekelo, indleko zokuthunyelwa kwemali ziyehla kakhulu… amanye amazwe angalikhangela eli thuba kwaye alamkele."
Ngeli xesha, iNgxowa-mali yeMali yeHlabathi (i-IMF) yahlala ichasene nokudibanisa iBitcoin kwicandelo eliqhelekileyo lezezimali.
Kwi-tweet yamva nje, umbutho ubhekise kwiposti yebhlog yangaphambili echaza ukungazinzi kodidi lweeasethi kunye nomngcipheko onokubangela uzinzo kwezemali. Enye yeengxaki eziphambili ze-IMF yayikukuba "Umgaqo-lawulo wemali uza kuphulukana nokuluma" ukususela ngoku "Iibhanki eziphambili azinakubeka inzala kwimali yelinye ilizwe."
I-El Salvadoran Congress ivuma ukusetyenziswa kweBitcoin njengeThenda yezoMthetho
I-El Salvadoran Congress isandula ukuvuma umthetho osayilwayo wokwenza iBitcoin ithenda esemthethweni kweli lizwe. Iingxelo zibonisa ukuba lo Mthetho uYilwayo ufumene “Ubungangamsha” vota, ebonisa ukuba uninzi lwelizwe lunemincili malunga nophuhliso olutsha.
UMthetho oYilwayo uqaphele ukuba:
"Injongo yalo mthetho kukulawula i-bitcoin njengethenda yezomthetho engathintelwanga ngamandla akhululayo, engenamda kuyo nayiphi na intengiselwano, nakweliphi na igama elifunwa ngabantu bakarhulumente okanye babucala bendalo okanye abasemthethweni."
Umthetho osayilwayo weBitcoin Ufumene iVoti eNkulu kwiNgqungquthela ye-El Salvadoran
Umongameli wase-El Salvador Nayib Bukele uzityeshele iindaba ngomphathi wakhe osemthethweni we-Twitter kwangoko ngoLwesithathu, eqonda ukuba:
“Umthetho weBitcoin uvunyiwe sisikhundla esiphezulu kwiNgqungquthela yaseSalvador. Iivoti ezingama-62 kwezi-84. Imbali. ”
Lo Mthetho usaYilwayo, othunyelwe kwiCongress emva kweLwesibini, ubunamanqaku ali-16. Ngokukodwa, inqaku loku-1 lithi:
Lo Mthetho uYilwayo uqaphele ukuba inqanaba lonaniselwano phakathi kwe-BTC kunye nedola "Iya kumiselwa simahla kwimarike," kwaye i "Amaxabiso anokuthi [abonakaliswe] kwi-bitcoin."
Ukongeza, lo Mthetho uYilwayo uchaze gca ukuba imirhumo yerhafu ingahlawulwa kwi-BTC, uqaphele ukuba:
"Utshintshiselwano nge-bitcoin aluyi kuxhomekeka kwirhafu yokufumana imali, njengayo nayiphi na ithenda esemthethweni."
Kwakhona, lo Mthetho uYilwayo ugunyazise ukuba iBitcoin kufuneka yamkelwe ngawo onke amashishini abonelela ngempahla kunye neenkonzo.
Okwangoku, inqaku le-12 laqaqambisa ukuba abo "Abanakho ukufikelela kubuchwephesha obuvumela ukwenza intengiselwano kwi-bitcoin ababandakanywanga kwisibophelelo" ukwamkela iintlawulo zeBitcoin. Isiqendu 12 sikwaqaphela ukuba "Urhulumente uzakukhuthaza uqeqesho olufunekayo kunye neendlela zokusebenza ukuze abantu bakwazi ukufikelela kwintengiselwano ye-bitcoin."
Ngapha koko, iNqaku le-14 lithi:
“Phambi kokuba usebenze lo mthetho, uRhulumente uyakuqinisekisa, ngokwenza indibano ethembekileyo eBanco de Desarrollo de EI Salvador (BANDESAL), ukuguqulwa okuzenzekelayo kwangoko kwe-bitcoin ukuya kwi-USD eyimfuneko kwezinye iindlela ezinikezwe nguRhulumente. . ”
Ngokwabantu abagulayo, lo Mthetho mtsha uza kuqala ukusebenza kwiintsuku ezingamashumi alithoba ukusukela ekupapashweni kwawo kwiGazethi yaseburhulumenteni.